Maalin: Janaayo 9, 2019
CHP Gürer: Aki Ammaanka Baabuurta Badbaadada Taleefanka Smart CH
Kadib shilkii tareenka ee ka dhacay Çorlu, kaas oo la sheegay inuu ka dhashay burburka sababay roobab mahiigaan ah oo ka da'ay jidadka bishii Luulyo ee la soo dhaafay, dadka 24 ayaa naftooda ku waayey, xalka TCDD wuxuu helay howsha siinta farsamayaqaanka hawsha kormeerka saadaasha hawada. CHP [More ...]
Tababaraha Shiinaha ee Shiinaha ayaa bilaabay safarro ku yaal Lanzhou-Chongqing Line
24 Disembar 2018's ugu horeysay ee Fuxing erm bullet train giden xawaaraha 160 km, oo lagu soo bandhigay bandhig ku yaal Beijing, wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo qadka Lanzhou-Chongqing laga bilaabo Talaadada ilaa Janaayo 8. Asalka cagaaran sare [More ...]
Mid ka mid ah ahmiyadaha ajandaha caalamiga ee bilihii la soo dhaafay ayaa ahaa go’aanka Mareykanka ee cunaqabateynta laga qaadayo Iran. In kasta oo codsigii Iran uu u gudbiyay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ka dhanka ah Mareykanka ay joojisay go’aankan [More ...]
Dimejayı Path Expansion
Dawlada Hoose ee Alanya, balaarinta wadada iyo nidaamka hagaajinta wadada Dimçayı. Hawlaha lagu fuliyay jihada loo yaqaan 'Belt Bridge' iyo Dugsiga Hoose ee Mu'miniinta waxaa lagu fuliyaa 2 mootooyin waaweyn iyo 4 xamuul. Degmada Alanya, kumanaan kun oo dadka deegaanka ah sanad walba [More ...]
Denizli waxay ku guuleysataa dibedda biriijka saddexagal
Denizli waa halbowlaha ugu weyn ee magaalada iyo isku socodka dhexmara iyada oo la furayo taraafikada isgoysyada buundada saddexagalka iyada oo malaayiin rodol ah ay wali ku jiraan jeebka Denizli. Kaydinta qiimaha ilaa 9 bilood oo adeegga ah [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha M. Cahit Turhan ayaa sheegay inay muhiimad gaar ah u leeyahiin noolaha marka la dhisayo Buundada 20anakkale ee 1915, taasoo horumar ka gaadhay boqolkiiba XNUMX dhismaheeda. [More ...]
Isbeddelka Xarunta Congresska
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay wadooyinka dayactirka iyo dayactirka wadooyinka ka sameyneysaa magaalada iyadoo isla markaana sameyneysa codsiyada balaarinta wadada. Wajahadan gudaheeda, helitaanka xarunta golaha dhexe ee lagu aasaasay warshadii hore ee birta Mannesman [More ...]
IMO ayaa ka digtay, roobab badan oo ka yimaada tareemada ayaa buuxiyay fillers
Rugta Injineerrada Rayidka (IMO) Diyarbakir Laange, oo ku taal gobolka illaa labo maalmood roob da ’culus, ayaa sheegay in ay waxyeello u geysatay wadada tareenka. Ururka xirfadleyda ah oo muujinaya xaaladda tareenka tareenka ee ka gudbaya degmada Ergani ee Diyarbakır oo leh sawir, [More ...]
Gaadhiga Baaskiillada ee Bursa Siriye iyo Iğdır xitaa waa ay ka dambeeyeen
Gaadiidka Cirka Bursa Sirnak iyo Iğdır'ın Xitaa Ka Dambeeya: Bursa, beeraha iyo warshadaha, ka dibna waxay rogeen wadada dalxiiska. Xaqiiqdii, gaadiidku waa qayb lama huraan u ah warshadaha iyo magaalada dalxiiska loo tago. [More ...]
Sharaxaad ka socota BURULAŞ; "Carruurtu ma qabsan doonaan qabow"
Magaalada Bursa, UL Waxay lugeeyaan 2 saacadood xilliga qaboobaha si ay u aadaan dugsi ku yaal Bursa Bugün news ka BURULAŞ. BURULAŞ qoraal qoraal ah, oo uga mahadcelineysa Bursada Bugü dareenkeeda, dhibaatada baska [More ...]
Dukumiinti cusub oo ku saabsan musiibada tareenka ee magaalada Çorlu waxaa lagu caddeeyay sawir laga qaaday wax yar ka hor musiibada rakaabkii taagnaa. Shil tareen oo ka dhacay Çorlu oo ay ku dhinteen 25 qof, 340 qof ayaa ku dhaawacmay [More ...]